Gịnị kpatara "anyị enweghị ihe kpatara na anyị anaghị ajụ"?
Jụ ihe anyị chọrọ bụ ihe anyị na-eme ọtụtụ oge n’oge ụbọchị anyị niile: ịtụ ahịa na draịva, jụọ mmadụ maka ụbọchị / agbamakwụkwọ, na-arịọ maka ihe adị kwa ụbọchị anyị chọrọ na ndụ.
Ma olee maka ịrịọ maka ihe dị anyị mkpa n'ime ala - ihe ndị a na-achọ ná ndụ nke anyị na-amaghị na anyị nwere mkpa n'ezie? Gịnị banyere ekpere ndị anyị kpegaara Chineke, na-echekwa ihe mere na a zaghị ha n’uche ma ọ bụ na ọ zaghị?
N’akwụkwọ Jemes, Jemes, otu odibo nke Chineke, dere ịrịọ Chineke ka O gboo mkpa anyị, mana ọ jụrụ Chukwu n’ụzọ nke okwukwe n’agaghị achọ ụzọ anyị. Na Jemes 4: 2-3, ọ na-ekwu, sị: "You nweghị n'ihi na ị naghị ajụ Chineke. Mgbe ị jụrụ, ị naghị anata, n'ihi na ị na-ajụ maka ebumnuche na-ezighi ezi, ka i wee nwee ike imefu ihe ị nwetara maka ihe ụtọ gị."
Ihe anyi nwere ike imuta na Akwukwo Nso a bu na anyi nwere ike ghara inweta ihe anyi choro ka Chineke gozie anyi maka na anyi anaghi eji obi ziri ezi juo ajuju. Anyị na-arịọ maka arịrịọ ndị a iji mejuo ọchịchọ, mkpa na ọchịchọ anyị, na Chineke chọrọ iji ekpere anyị gọzie anyị, mana ọ bụrụ naanị na ha chọrọ inyere ndị ọzọ aka ma nye ya otuto, ọ bụghị naanị anyị onwe anyị.
Enwere otutu ihe ichoputa n'amaokwu a, ya na otutu amaokwu ndi metutakwara otu eziokwu, ya mere ka anyi daba n'ime ma muta ihe banyere igwa Chineke ajuju n'uche ya.
Kedu ihe gbara Jems nke anọ gburugburu?
Jemes dere, onye e kwuru na Bible ịbụ “ohu nke Chineke na nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst,” Jemes 4 na-ekwu banyere mkpa ọ dị ịghara ịdị mpako kama ịdị umeala n'obi. Isiakwụkwọ a kọwakwaara anyị na anyị ekwesịghị ikpe ụmụnna anyị ikpe ma ọ bụ lekwasị anya naanị n’ihe anyị ga-eme echi.
Akwụkwọ Jemes bụ leta nke Jemes degaara ebo iri na abụọ n’ụwa nile, nke mbụ Nzukọ-nsọ ​​ndị Kraịst, iji kesara ha amamihe na ezi-okwu nke kwekọrọ n’uche Chineke na nkuzi nile nke Jisus. ha na-ekpuchi isiokwu ndị dị ka idobe okwu anyị (James 3), idi ọnwụnwa na ịbụ ndị na-emezu, ọ bụghị naanị ndị na-ege ntị, Akwụkwọ Nsọ (James 1 na 2), ịgụghị ndị ọkacha mmasị na igosipụta okwukwe anyị (James 3).
Mgbe anyị batara na Jemes 4, o doro anya na akwụkwọ Jems bụ Akwụkwọ Nsọ nke na-agba anyị ume ilebanye anya iji hụ ihe kwesịrị ịgbanwe, ebe anyị maara na enwere ike idozi ule ndị gbara anyị gburugburu karịa mgbe anyị bu otu Chineke n'uche, ahụ na mmụọ.
Jemes lekwasịrị anya n'isi 4 na-ekwu maka ịghara ịdị mpako, kama ido onwe ya n'okpuru Chineke kama ịdị umeala n'obi na-arịọ maka mkpa a ga-ezute, dịka "Chineke na-eguzogide ndị mpako, ma na-enye ndị dị umeala amara" (James 4: 6). Isi nke a gara n’ihu ịgwa ndị na - agụ ya ka ha ghara ikwu okwu ọjọọ gbasara ibe ha, tụmadị ụmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị n’ime Kraịst, na ikwenyeghị na mmadụ na - ekpebi ụbọchị ya, kama ọ bụ uche Chukwu na ihe na - eduzi ya. Ọ chọrọ ka e buru ụzọ mee ya (Jemes 4: 11-17).
Mmalite nke isi nke 4 na-enye onye na-agụ ya echiche ziri ezi site na ịjụ etu agha si amalite, otu esemokwu si amalite ma zaa ajụjụ a na ajụjụ ọzọ ma esemokwu ndị a na-amalite n'ihi ndị mmadụ na-agbaso ọchịchọ nke onwe ha maka mgba na njikwa (James) 4: 1 -2). Nke a na - eduga na nhọrọ nke akụkụ Akwụkwọ Nsọ dị na Jemes 4: 3 na ihe kpatara ọtụtụ mmadụ anaghị enweta ihe kachasị ha mkpa site na Chineke bụ n'ihi na ha na - arịọ n'echeghị echiche na - ezighị ezi.
Amaokwu ndị na-eso nke a ga-atụlekwu ihe mere ndị mmadụ ji ajụ maka ihe ha chọrọ maka ebumnuche na-ezighi ezi. Ndị a na-agụnye eziokwu ahụ bụ na ndị na-agbalị ịbụ ndị enyi nke ụwa ga-aghọ ndị iro nke Chineke, nke na-eduga n'echiche nke ime ihe ziri ezi ma ọ bụ nganga nke ga-eme ka o siere ya ike ịnụ Chineke nke ọma.
Kedu ihe ọzọ Akwụkwọ Nsọ kwuru gbasara ịrịọ maka ihe?
Jems 4: 3 abụghị naanị amaokwu na-ekwu maka ịrịọ Chineke maka enyemaka maka mkpa gị, nrọ na ọchịchọ gị. Jizọs kwuru otu amaokwu kachasị amara na Matiu 7: 7-8: “Rịọnụ, a ga-enyekwa unu; chọọ, unu ga-achọta; kụọ aka ma a ga-emeghere gị. N'ihi na ndị niile rịọrọ na-anata; onye na-achọ achọta; onye ọ bụla kụrụ aka, ọnụ ụzọ ga-emeghe. ”Otu ahụ ka ekwuru na Luk 16: 9.
Jisos kwukwara banyere ihe ga - eme mgbe anyị rịọrọ Chineke n’okwukwe: “Ihe ọbụla ị rịọrọ n’ekpere, na-ekwere, ị ga - anata” (Mat. 21:22).
O nwekwara otu echiche ahụ na Jọn 15: 7: "Ọ bụrụ na ị nọgidenụ n'ime m, okwu m ga-anọdụkwa n'ime gị, ị ga-arịọ maka ihe ị chọrọ, a ga-emere gị ya."
John 16: 23-24 ọdọhọ ete: “Ke usen oro mbufo idibụpke mi baba n̄kpọ kiet. N'ezie asim unu, na Nnam g whatevernye unu ihe ọ bula unu gāriọ n'aham. I jubeghị ihe ọ bụla n’aha m ruo ugbu a. Rịọnụ, unu ga-anatakwa ma ọ yourụ unu zuo oke. "
Jemes 1: 5 na-adụkwa ọdụ ihe na-eme ma ọ bụrụ na anyị chọrọ nduzi Chineke, sị: "Ọ bụrụ na amamihe kọrọ onye ọ bụla n'ime unu, ka ọ rịọ Chineke, onye na-enye mmadụ nile n'afọ ofufo, n'ataghị ụta, a ga-enyekwa ya."
N'iburu amaokwu ndi a anya, o doro anya na anyi kwesiri ịrịọ n'uzo nke iwetara Chineke otuto na ịdọta ndi mmadu n'ebe Ọ nọ, ma n'otu oge ahụ na-egbo mkpa na ọchịchọ anyị nwere. Chineke agaghị anabata ekpere gbasara ịba ọgaranya, imegwara imegwara ndị iro, ma ọ bụ maka ịka ndị ọzọ mma ma ọ bụrụ n’adabaghị n’uche ya na anyị ga-ahụ ndị agbata obi anyị n’anya dịka onwe anyị.
Chineke ọ ga-enye anyị ihe niile anyị rịọrọ ya?
Ọ bụ ezie na anyị na-arịọ Chineke ka o mezuo mkpa anyị na ebumnuche ziri ezi, ọ bụghị iwu na anyị ga-arịọ arịrịọ ndị ahụ n'ekpere. N'ezie, enwere ọtụtụ oge na ọ dịghị. Ma anyị na-anọgide na-ekpe ekpere ma na-arịọ maka ihe agbanyeghị.
Mgbe anyị na-echebara ihe anyị na-ekpe n’ekpere echiche, anyị kwesịrị ịghọta ma cheta na oge ahụ Chineke kwuru abụghị otu ihe. Okwesighi ime ka arịrịọ gị mee n'otu ntabi anya, ọ bụrụ na enwere ndidi, afọ ojuju, nnọgidesi ike na ịhụnanya n'ịchere.
Ọ bụ Chineke nyere gị ọchịchọ ndị ahụ n’obi gị. Oge ụfọdụ, mgbe ịghaghị oge tupu ihe emee, mara na ọ bụ nzube Chukwu ịgọzi gị site n’ọchịchọ a nke O nyeworo gị.
Otu mmetụta m na-echeta oge niile mgbe m na-agba mgba na ichere ndokwa Chineke bụ icheta na "ee" nke Chineke nwere ike ọ gaghị abụ "ee" ma "erubeghị". Ma ọ bụ, ọ nwekwara ike ịbụ "Enwere m ihe ka mma n'uche".
N’ihi ya, adala mbà ma ọ bụrụ na ọ dị gị ka ị na-ebu ezi ihe n’obi na-arịọ ma ị mara na Chineke nwere ike inye gị ya, mana ị chọpụtala na azabeghị ma ọ bụ mezuo ekpere gị. Echefughi ya n’anya Chukwu, ma aga eji ya mezuo ihe n’ile n’ala eze ya ma too gi dika nwa Ya.
Wepụta oge n'ekpere
Jemes 4: 3 na-enye anyi ezigbo ihe omimi mgbe Jemes kwuru na enweghi ike ịza ekpere ndi anyi nwere n'ihi na anyi ajughi site na ebumnuche nke Chineke kama na ebumnuche nke uwa.
Ma, amaokwu a apụtaghị na ị gaghị agakwuru Chineke n’ekpere na ọ gaghị aza. Ọ na-ekwu karịa na mgbe ị wepụtara oge iji chọpụta ma ihe ị na-arịọ bụ ihe dị mma maka gị na nke Chineke, mgbe ahụ ị na-abịa na mkpebi nke ma ọ bụ ihe ị ga-achọ ka Chineke mezuo ma ọ bụ.
O bukwa nghota na na Chineke azaghi ekpere gi aputaghi na O gaghi adi Ya; ọ na-abụkarị, n'ihi na Chineke maara anyị nke ọma karịa ka anyị maara onwe anyị, nzaghachi nye arịrịọ anyị dị mma karịa ka anyị tụrụ anya ya.
Nke gara aga Post Gara aga post:Ndụmọdụ taa bụ Septemba 17, 2020 site n'aka onye edemede Syriac na-enweghị aha
Next Post → Post ozo:Egosi taa ma ọ bụrụ na ị kwere Jesus wụsara graces n'ime ndụ gị